WPA/WPA2 ကို အချိန် 15 မိနစ်လောက်နဲ့ နဲ့ဟက်နိုင်တယ်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ Software | Myanmar Black Hacking
0 WPA/WPA2 ကို အချိန် 15 မိနစ်လောက်နဲ့ နဲ့ဟက်နိုင်တယ်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ Software
ကျနော်တို့ ဘရိုတွေစမ်းကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် CD LINUX MINIDWEP ဆိုတဲ့ OS ပါOS ဖြစ်လို့ WiFi Adapter တွေ Driver မသိတာကိုအင်စတောလုပ်ခွင့်ပြုတာကြောင့်ကွန်ပြုတာအားလုံးနီးပါးနဲ့အဆင်ပြေနိုင် ပါတယ်( CPU နိမ့်တဲ့စက်တွေမှာတော့မရနိုင်ပါ)။ အောက်ပါ Link မှာ အသုံးပြုပုံနဲ့ Software ကိုဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Labels: Other Tools . PC Software . WiFi Hacking